२०७६ असार ६ शुक्रबार ११:२३:००
प्रतिशोध लिएर द्वन्द्व चर्काउने र जनतालाई दुःख दिने बाटोमा सरकार
१. सर्लाहीमा बिहीबार दुईतर्फी गोली हानाहान, क्षति एकतर्फी, विप्लवका जिल्ला इन्चार्जको मृत्यु
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल मुठभेडमा मारिएको प्रहरीको दाबी छ । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ लखन्ती खोलामा बिहीबार दिउँसो मुठभेड भएको प्रहरीको भनाइ छ । राष्ट्रसेवक प्रहरीलाई सामान्य पनि क्षति नपुग्नु सुखद खबर हो । तर, मुठभेड भएर नै यस्तो भएको हो भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ । बाटोमा हिँडिरहेका मान्छेलाई शंकाका आधारमा प्रहरीले ‘अवश्य’ गोली चलाउँदैन । विप्लव समूहकाले पहिले गोली चलाएका हुन् भने प्रहरीलाई पनि चोटपटक लाग्न सक्थ्यो । सुरुमा फायरिङ गर्नेले केही पनि गर्न नसक्ने, तर जवाफी कारबाही गर्नेले मान्छे ठहरै पार्ने अनौठो उदाहरण बिहीबारको घटनाले देखाएको छ । प्रहरीसँग यस्तो कौशल विरलै देखिने गर्छ ।
२. विप्लव समूहका कार्यकर्ता बन्दुक बोकेर गाउँगाउँ हिँड्न थालेका हुन् ? के छ राज्यको रणनीति ?
बाटोमा प्रहरीसँग जम्काभेट भएपछि विप्लव समूहका चार कार्यकर्तासँग मुठभेड भएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोखरेलका अनुसार घटनास्थलबाट पेस्तोल बरामद भएको छ । प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय र जिल्लाबाट खटिएको टोलीसँग मुठभेड भएको पनि उनले बताए । प्रहरीको दाबीले प्रश्न उठ्छ– के विप्लव समूह साँच्चै द्वन्द्वमा गएको हो ? उनीहरू हतियार बोकेर खोलानाला र गाउँ–पखेरा हिँड्न थालेका हुन् ? स्थिति साँच्चै त्यस्तै हो भने एक–एकजनालाई गोली हानेर यो समस्याको समाधान हुन सक्छ ? मुठभेडले नै समस्या समाधान गर्ने हो भने राज्यसँग के–कस्तो रणनीति छ ? तर, प्रहरीका यस्ता कारबाहीले समस्या समाधान गर्नेभन्दा द्वन्द्व उक्साउने जोखिम छ ।
३. गृहमन्त्री भन्छन्– विप्लवले चार कम्पनी सेना बनाइसके, हो भने गोली हान्ने कि वार्ता गर्ने ?
१२ जेठमा काठमाडौंमा बम विस्फोट हुँदा विप्लव समूहकै तीनजनाको मृत्यु भएको थियो । भोलिपल्ट संसद्मा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भनेका थिए, ‘विप्लवले चार कम्पनी सेना बनाइसके ।’ राज्यसँग यति ठूलो सूचना छ भने उसको रणनीति के हो ? सरकार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न चाहन्छ कि बल प्रयोग गर्न ? विप्लव समूहले सैन्य दस्ता नै बनाइसकेको भनेर सूचना पाउँदा पनि गृहले त्यसविरुद्ध कुनै सुरक्षा रणनीति बनाउन आवश्यक ठानेको छैन । वास्तवमा विप्लव समूहप्रति सरकारको नीति नै प्रस्ट छैन । विस्फोटका घटना बढ्दै जाँदा सतर्क रहन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनेबाहेक गृहले यो प्रकरणमा विशेष योजना बनाउन सकेको छैन । उल्टो सरकारी संयन्त्रहरूलाई नै अलगथलग र कमजोर बनाइएको छ ।
विप्लव समूहसँग प्रतिशोध शृंखला
सरकार विप्लव समूहसँग संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि बल प्रयोगमा उत्रिएको छ । प्रहरी ‘इन्काउन्टर’मा विप्लवका दुई कार्यकर्ता मारिएका छन् । यो पार्टीका नेता तीर्थराज घिमिरे ७ जेठमा प्रहरीको गोलीबाट भोजपुरमा मारिएका थिए । त्यसको प्रतिशोधस्वरूप सो संगठनले १३ जेठमा नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो ।
बन्दमा राजधानीमा शक्तिशाली बम पड्काएर धक्का दिने उनीहरूको योजना थियो । तर, सेटिङ मिलाउन नजान्दा अघिल्लो दिन नै राजधानीका तीन स्थानमा बम विस्फोट भए । जसमा सो समूहका पाँचजनाले ज्यान गुमाएका थिए । बिहीबार प्रहरीले सर्लाही इन्चार्ज पौडेल मुठभेडमा मारिएको दाबी गरेको छ । तर, उनलाई गोली नै हान्नुपर्ने गरी मुठभेड भएको आधार प्रहरीले दिन सकेको छैन । जसकारण सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गर्दा हिंसा बढ्न सक्ने आशंकासमेत गरिएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल भने प्रहरीले अनावश्यक रूपमा कतै पनि बल प्रयोग नगरेको दाबी गर्छन् । एनसेल कार्यालय र व्यवसायी रोहन गुरुङको घरमा विस्फोट गराएपछि सो समूहमाथि सरकारले गत २८ जेठमा प्रतिबन्ध लगाएर कारबाही थालेको थियो । त्यसयता विप्लवका पाँच सय ४० कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
#गिरफ्तार # मुठभेड
अमेरिका–चीन मुठभेडको दिशामा
बालुवाटारपछि सरकारको अर्काे दमन : माइतीघरबाट गिरफ्तार भए विद्यार्थी(फोटोफिचर)
आठ महिनापछि गुल्मी प्रहरीद्वारा छिनुवा घटनाका तीन आरोपी गिरफ्तार
गिरफ्तारपछि रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्– यो अन्तिम लडाइँ हो, आफ्नो ठाउँमा डटौँ
झाँक्रीको पक्राउ देशलाई मुठभेडमा लगेर निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने षड्यन्त्र : जनार्दन शर्मा